10ka Feejiile ee Filterka Ugu Wanaagsan 2020-Qasabadaha jikada, Qasadaha Buuxi Dheriga, Qolka Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / 10ka Tuug ee Ugu Fiican Filtarrada 2020
10ka Tuug ee Ugu Fiican Filtarrada 2020
2020 / 10 / 09 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4866 0
Nidaamka otomaatiga aqoonta ee Manta ayaa hadda xidhay $ 13 milyan oo silsilad A1 ah oo madaxeedu yahay Bessemer Enterprise Sahabo. Manta ayaa sheegaysa inay lacagta u dhigeyso hormarinta shaqaalaha iyo hagaajinta wax soo saarka sababta oo ah waxay umuuqataa inay kusii fideyso dhulal cusub.
Abtirsiinta aqoonta, oo lagu darayo asalka xogta, waxa ku dhacaya, iyo sidoo kale goobta ay ku dhaceyso waqtiga, waxay soo bandhigeysaa aragti sare oo waxay sahlaysaa khaladaadka mar labaad saldhigga inuu dhaqaaqo. Si kastaba ha noqotee, dhaqamada ayaa caadi ahaan ka duwan shirkad ilaa shirkad, oo ay weheliyaan kaliya 20% ururada daabacaya xikmadda caqliga iyo garashada fahamka, sida laga soo xigtay O'Reilly.
Codsiga ugu fiican ayaa ah in lagu daro farsamooyinka soo saarista iyo maaraynta metadata qalabka hore iyo gadaal, kuwaas oo qaata shaqo iyo waqti badan. Si arrintan wax looga qabto, xirmada Manta waxay soo bandhigeysaa sirdoon tayo leh oo ka caawinaya horumarka, iyadoo u muuqata inay soo gaabinayso waqti si loo dhiirrigeliyo kor u qaadista isku dayga dowladnimada iyo hubinta tayo kasta iyo nabadgelyo sare.
Manta waxay u shaqeysaa xarun udub dhexaad u ah fahamka ka dhex socda ganacsiga. Sawirqaadayaasha nidaamku waxay isku daraan waxyaabo badan oo dareen ah, iyagoo si xoog leh u soo ururinaya metadata si dib loogu dhiso nasab dhan. Khadadka waxaa lagu maamuli karaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka muuqaalka ee Manta, ugaarsaduna waxay soo saari kartaa waxyaabo gaar ah. Macaamiisha sidoo kale waxay ku falanqeyn karaan abtirsiinta noocyo dhaqso badan waxayna kala hadli karaan dadka kale shirkadda.
Filashooyinku waxay kala soo bixi karaan metadata u gaarka ah ilaha kala duwan ee Manta waxayna falanqeeyaan xaaladda dareenka ama aqoonta socodka xilli kasta xaddidaadda. Maamulaha guud Tomas Kratky wuxuu sheegayaa awoodahan inay kordhinayaan maareynta aqoonta ganacsiga si ay macaamiisha ugu soo bandhigaan aragti qoto dheer xaalada horumarka ku xeeran. Manta waxay kobcisay waxsoosaarka kooxaha xogta ee shirkadaha sida Teradata iyo Comcast boqolkiiba 30 ilaa 40%, halka la fududeeyay socdaalka nidaamka, oo ku saleysan Kratky.
Xeeladaha hagista ee mas'uuliyadaha soo noqnoqodka ah waxay waqtiga oo dhan ka mid ahaayeen dhowr is-beddeleyaal xanuun oo muhiim u ah maaraynta xogta. Ururada ka jira gees kasta oo adduunkan ka mid ah ayaa la dagaallamaya dhibaatadan, sidaa darteed miyaan uga dhaqsaha badan Manta oo aan halkan ka helay intaan noolahay, ”ayuu Kratky email ugu sheegay VentureBeat. "Nasabku waa qayb kaa maqan ee maamulkan xogta qarsoodiga ah, oo ay weheliso awood u leh inuu si muuqata u xoojiyo barta otomaatiga. Nooca muhiimka ah ee metadata iyo ku-tiirsanaanta (sida caadiga ah qarsoon) inta u dhaxaysa aqoonta ururada waxay u saamaxdaa macaamiisha inay si dhab ah u fahmaan oo ay barnaamij ahaan u xakameeyaan agagaarkooda ”
Hore:: Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa nooca qasabada Next: Nidaamyada Tuubbooyinka Qubeyska Roob-biyoodka Ugu Fiican